नवलपरासेली साहित्यिक पत्रकारिता – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ माघ २, शुक्रबार ०९:०१ गते
हरेक व्यक्ति, समाज, क्षेत्र र समग्र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा स्वच्छ र स्वस्थ पत्रकारिताले अहं भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यसले चेतनाको विकासमा मात्र नभई भाषिक, साहित्यिक र सांस्कृतिक पक्षलाई उन्नत तुल्याउनमा मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्छ नै, राजनीतिक चरित्रलाई जिम्मेवार र निष्ठावान् बनाउने कार्यमा पनि अधिकतम भूमिका खेल्दछ ।
यद्यपि, विषय र परिवेशअनुरुप पत्रकारिता बहुआयामिक प्रकृतिको हुने गर्छ । विशिष्टीकरण गरेर हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, भाषा, साहित्य, अध्यात्म, राजनीति, समाज, संस्कृति आदि इत्यादि । त्यसमा पनि नेपाली भाषा र साहित्यको सन्दर्भलाई हेर्दा पत्रपत्रिकाले उल्लेख्य भूमिका खेलेको भेटिन्छ । यसर्थ, यस लेखमा नेपाली भाषा तथा साहित्यको प्रवद्र्धन र विकासमा अझ त्यसमा पनि नवलपुरेली साहित्यको विकासमा खेलेको भूमिका उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपाली भाषा संस्कृतबाट प्राकृत हुँदै एघारौँ शताब्दीमा जन्मेको देखिन्छ । झन्डै सोह्रौँ शताब्दीसम्म ताम्रपत्र, कनकपत्र, शिलालेख र भुर्जपत्रहरुमा मात्र सीमित रहेको नेपाली भाषाले सोह्रौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धतिर ग्रन्थात्मक स्वरुप धारण गर्दै अठारौँ शताब्दीको आरम्भ भएपछि साहित्यिक रुप वरण गर्न थाल्दछ । यसपछि भने भाषाले पनि तीव्र गतिमा विकसित हुने र साहित्यले वामे सर्ने परिवेश निर्माण हुन्छ ।
यद्यपि, नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल जुन गोरखापत्र विसं १९५७ पूर्वलाई लिइन्छ, त्यतिखेर पनि मुद्रणको सुविधा प्रायः शून्य नै रहेको हुन्छ । त्यतिबेलासम्म समाचारमूलक होस् वा साहित्यिक कुनै पनि प्रकृति र प्रवृत्ति बोकेका पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशन हुन सकेको पाइँदैन । नेपाली साहित्यको माध्यमिक कालखण्डमा विसं १९०८ तिर जङ्गबहादुरले बेलायतबाट फर्केर आउँदा ल्याएको गिद्धे प्रेस नै पहिलो छापाखाना मानिन्छ । यसले धर्मशास्त्र र अड्डाहरुका लागि आवश्यक सामग्रीहरु छपाए पनि समाचार, साहित्य आदि विषय र सन्दर्भहरु प्रकाशनमा आएकै हुदैनन् । पछि कुवेर रत्नको ‘बुद्ध प्रेस’ मोतीरामको सक्रियतामा स्थापित ‘पाशुपत प्रेस’ आदिले गति लिन थालेपछि नेपालमा प्रेसको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।
सन् १९५५ श्रावणमा नरदेव, मोतीकृष्णको सम्पादनमा प्रकाशित ‘सुधा सागर’ नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका हो । उनै नरदेव, मोतीकृष्णको प्रकाशन सम्पादनमा ‘पाशुपत प्रेस’बाट ‘गोरखापत्र’को प्रकाशन आरम्भ हुन्छ । साप्ताहिक, अर्धसाप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक हुँदै २००८ सालबाट दैनिक पत्रिकाका रुपमा यसले विकासको गति पकड्दै अद्यापि अघि बढिरहेको छ । समाचारमूलक पत्रिका हँुदाहँुदै पनि यसमा साहित्यिक रचनाहरु पनि प्रकाशन हुन्थे, तापनि साहित्यप्रधान पत्रिकाको आवश्यकता महसुस गरी ऋद्धिबहादुर मल्लको सम्पादनमा १९९१ साल फागुनबाट ‘शारदा’ मासिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ हुन्छ । यसपछि १९९२ मा सूर्यभक्त जोशीको सम्पादनमा ‘उद्योग’ पाक्षिक, २००४ सालमा हृदयचन्द्रसिंह प्रधानको सम्पादनमा ‘साहित्यस्रोत’, देवीप्रसाद रिमालको सम्पादनमा २००६ मा काठमाडौँबाट नै ‘आँखा’ यसै वर्षबाट बुद्धिसागर र शेषराज शर्माको सम्पादनमा ‘पुरूपार्थ’ प्रकाशन हुन्छ ।
नेपालबाहिरबाट भने नेपाली भाषामा पत्रपत्रिकाको प्रकाशन विसं १९४४ बाट आरम्भ भएको देखिन्छ । ‘गोर्खा सञ्चार पत्र’ले पहिलो नेपाली पत्रिका हुने अवसर प्राप्त गरेको भए पनि वर्तमानसम्म नै यो अप्राप्य रहेको छ । यसपछि रामकृष्ण वर्माको सम्पादनमा बनारसबाट ‘गोर्खा भारत जीवन’ साप्ताहिक, दार्जिलिङबाट १९५८ सालमा पादरी गंगाप्रसाद प्रधानको सम्पादनमा ‘गोर्खा खबर कागज’ मासिक, सदाशिव शर्माको सम्पादनमा बनारसबाट १९५९ मा ‘उपन्यास तरङ्गिणी’ प्रकाशित हुन्छ । बनारसबाट नै रसिक समाजको सम्पादनमा १९६३ मा ‘सुन्दरी’, राममणि आ.दी.को सम्पादनमा ‘माधवी’ पत्रिकाको प्रकाशन हुन्छ । सूर्यप्रसाद ज्ञवालीको सम्पादनमा १९७२ मा ‘गोर्खाली’, पारसमणि प्रधानको सम्पादनमा खर्साङबाट ‘चन्द्रिका’, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रमुख सम्पादनमा बनारसबाट २००४ मा ‘युगवाणी’ दार्जिलिङबाट पारसमणि प्रधानको सम्पादनमा ‘भारती’ मासिक प्रकाशित हुन्छ ।
२००७ सालको जनक्रान्ति सफल भएपछि सञ्चारगृहमा लागेको बन्देज खुकुलो भएपछि थुप्रै पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशन हुन्छन् । यसपछि स्वदेशभित्रबाट २००७ मा हृदयचन्द्रसिहको सम्पादनमा ‘जागरण’, यसै वर्ष सिद्धिचरण श्रेष्ठको सम्पादनमा ‘आवाज’, कुमारी कामाक्षीको सम्पादनमा २००८ मा ‘महिला’ मासिक, नारायणप्रसाद बाँस्कोटाको सम्पादनमा ‘प्रगति’, ईश्वर वल्लभको सम्पादनमा २०१३ मा ‘इन्द्रेणी’ मासिक श्यामप्रसाद शर्माको सम्पादनमा ‘साहित्य’ द्वैमासिक, कमलमणि दीक्षितको सम्पादनमा ‘नेपाली’ त्रैमासिक आदि पत्रिकाहरु प्रकाशित हुन्छन् । २०१७ सालमा वासुदेव रिसालको सम्पादनमा ‘रुपरेखा’ द्वैमासिक पत्रिकाको प्रकाशन हुन्छ । २०१८ मा भैरव अर्यालको सम्पादनमा ‘रचना’ चौमासिक, मदनदेव भट्टराईको सम्पादनमा २०२० मा ‘रत्नश्री’ विराटनगरबाट विपीनदेव ढुङ्गेलको सम्पादनमा ‘पारिजात’, २०२५ मा गोरखापत्र संस्थानको संस्थागत प्रयासमा ‘मधुपर्क’ मासिक तथा प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट रत्नध्वज जोशीको सम्पादनमा प्रज्ञा प्रकाशित हुन्छन् ।
२०२८ मा जनकपुरबाट लक्ष्मण खनालको सम्पादनमा ‘आँखा’ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘मिर्र्मिरे’ द्वैमासिक तथा २०३० मा वासु रिमाल यात्रीको सम्पादनमा ‘विदेह’ तथा धरानबाट कुन्ता शर्माको सम्पादनमा ‘संकल्प’ प्रकाशित हुन्छन् (कोइराला, २०५७ ः ३०) ।
यसपछि पनि अनगिन्ती पत्रपत्रिका प्रकाशन हुन पुग्छन् । तीमध्ये केहीले मात्र उल्लेख्य स्थान र योगदान पु¥याउँछन् । तीमध्ये २०३५ सालबाट ‘गरिमा’ प्रकाशन आरम्भ हुन्छ । यो अद्यापि निरन्तर प्रकाशित रहेको छ । यसले नेपाली भाषा र साहित्यको स्तरवृद्धि तथा श्रेयवृद्धि गर्नमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको छ । २०३९–४० मा मोहन दुवालको सम्पादनमा ‘जनमत’ मासिक प्रकाशित हुन्छ । ‘कुञ्जिनी’, ‘वाङ्मय’, ‘सम्प्रेषण’ आदि पनि उल्लेख्य अनुसन्धानपरक पत्रिकाका रुपमा रहेका छन् । यिनले पनि नेपाली भाषा र साहित्यको उन्नयनमा विशेष भूमिका खेल्दै आएका छन् । यसअतिरिक्त ‘वैजयन्ती’, ‘वागीश्वरी’, दृष्टि, रजस्थल, चितवन सन्देश, पल्लव आदि थुप्रै पत्रिकाहरु प्रकाशन भइरहेका पाइन्छन् । तिनको चर्चा यहाँ ज्यादा विस्तार बन्न जाने भएकाले यो सानो लेखमा तिनको नामोल्लेख गरिएको छैन ।
यस्तै, मुलुकबाहिरबाट पनि पत्रिका प्रकाशन हुने क्रम निरन्तर रहिरहेको हुन्छ । बाहिरबाट प्रकाशन हुने पत्रिकाहरुमध्ये बनारसबाट २०१३ सालमा भानुभक्त पोखरेल र अन्यको सम्पादनमा प्रकाशित ‘नौलो पाइलो’को भूमिका निकै उल्लेख्य रहेको छ । यसै पत्रिकाका माध्यमबाट नेपाली भाषा र साहित्यमा झर्रोवादी आन्दोलन आरम्भ भएपछि नेपाली भाषाले नयाँपन र नयाँ उचाइ पनि प्राप्त गर्दछ । यसपछि २०२१ सालतिर दार्जिलिङबाट इन्द्रबहादुर राईको प्रधान सम्पादनमा ‘तेस्रो आयाम’ नामक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ हुन्छ । यसैका माध्यमबाट नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा आयामेली आन्दोलनले नयाँ गति प्राप्त गर्दछ । बनारसबाट अद्यापि ‘उदय’को प्रकाशन निरन्तर भइरहेको छ । यसपछि पनि अन्य थुप्रै पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशन हुन्छन् ।
नेपाली भाषा र साहित्यको उन्नयनमा योगदान पु¥याउने अभिप्रायले नवलपरासेली साहित्यिक व्यक्तित्वहरुको सत्प्रयासमा नवलपरासी जिल्लामा पनि थुप्रै पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशन भएको पाइन्छ । खासगरी, २०२९ सालमा नयाँ कदम समूहको गठन भई सोही वर्षबाट इन्द्रप्रसाद अकेलाको प्रधान सम्पादनमा ‘नयाँ कदम’ पत्रिकाको प्रकाशन भयो र यो नै कलकत्तामा छापिएर नवलपुरमा वितरण गरिएको नवलपरासीको पहिलो नेपाली साहित्यिक पत्रिका हो । काशीराम शर्मा गैरेका अनुसार तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण चितवनबाट मुद्रण गरिएको भए पनि सुरक्षालाई मध्यनजर गरी कलकत्ता मुद्रण राखिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरी २०३५ मा हिमलाल ज्ञवालीको सम्पादनमा ‘त्रिवेणी साप्ताहिक’, २०३७ मा हिमलाल ज्ञवालीकै सम्पादनमा ‘लालीगुराँस’ मासिक, २०४४ मा सूर्य भुसालको प्रकाशन एवं सम्पादनमा ‘नयाँ ज्योति’ साप्ताहिक, २०४५ मा कर्णबहादुर कार्कीको प्रकाशन तथा सम्पादनमा ‘दैनिक लुम्बिनी’ र २०४८ मा भूपेन्द्र शर्मा भट्टराईको प्रकाशन तथा सम्पादनमा ‘देवचुली’ साहित्यिक मासिक पत्रिकाहरुको प्रकाशन आरम्भ भयो । मूलतः ‘लालीगुराँस’ र ‘देवचुली’ विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाहरु हुन् ।
नवलपरासीबाट दर्ता भए पनि ज्ञवाली र कार्कीले बुटवलबाट र भुसालले काठमाडौँबाट मुद्रण गरे भने देवचुलीको मुद्रणचाहिँ नवलपरासीबाट नै भएको थियो । यी पत्रिकाहरुमध्ये ‘लालीगुुराँस’, ‘देवचुली’ र ‘लुम्बिनी’ले प्रकाशनमा निरन्तरता दिइरहेका पनि छन् । यिनमा नियमितरुपमा ‘पाहुर’ शीर्षकमा साहित्यिक कृतिहरु प्रकाशन हुने गरेका छन् । देवचुली प्रारम्भमा पूर्णतः साहित्यिक पत्रिकाका रुपमा, पचासको दशकमा आंशिकरुपमा समाचारमूलक र वर्तमानमा विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाका रुपमा नै प्रकाशित हुँदै आएको छ । वर्तमानमा भने यो पत्रिका बजारमा देखिएको छैन । ‘नयाँ कदम’बाट आरम्भ भएको साहित्यिक यात्रालाई ‘लालीगुराँस’ले भने निरन्तरता दिइरहेको छ । २०७७ सालमा प्रेमा विशेष भनेर लालीगुराँस (४० वर्ष अंक १) प्रकाशनमा आएको छ ।
गैँडाकोटबाट २०५८ मा सुजन अधिकारीको सम्पादनमा गजलप्रधान मासिक पत्रिकाका रुपमा ‘इन्दु’को प्रकाशन हुन्छ । ७ अङ्क प्रकाशनपश्चात् यसको प्रकाशन बन्द हुन पुग्दछ (सम्पा. अधिकारी) । पछि सुजन अधिकारीकै सम्पादनमा २०६२ बाट ‘आदर्श राष्ट्रिय विविध’ प्रकाशन आरम्भ हुन्छ । वर्तमानसम्म निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको यस पत्रिकाका २९ अङ्क प्रकाशन भइसकेका छन् ( सम्पा. अधिकारी) । ०५७ तिर लक्ष्मीप्रसाद चापागाईंको सम्पादनमा ‘सहयात्री’ मासिकको प्रकाशन आरम्भ हुन्छ । यो पनि २७ अङ्क प्रकाशन भएपछि बन्द हुन पुग्दछ (सम्पा. अधिकारी) । गैँडाकोटबाट नै लेखराम सापकोटाको सम्पादनमा २०५८ बाट ‘अनामिका’ मासिक प्रकाशन आरम्भ हुन्छ । लेखरामपश्चात् भीम र लक्ष्मीसागरको सम्पादकत्वमा ३२ अङ्क प्रकाशन भई यो पनि बन्द हुन पुग्दछ । २०६०–०६१ तिर रामकान्त न्यौपानेको सम्पादनमा ‘इन्द्रेणी’ मासिक प्रकाशन हुन्छ । ७ अङ्कसम्म प्रकाशन भएपछि यो पनि बन्द हुन पुग्दछ । २०६० पछि लोकेन्द्र पौडेलको सम्पादनमा ‘आदान–प्रदान’ मासिक र मनिक देवकोटाको सम्पादनमा ‘द स्पाकेल’ मासिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ हुन्छन् र केही अङ्कको प्रकाशनपश्चात् यिनले पनि विश्राम लिन्छन् । २०५८ सालमा विद्रोही गिरीको सम्पादनमा ‘बाल सृजना’ त्रैमासिक प्रकाशन हुन्छ । १३ अङ्क प्रकाशन भएपछि यो पनि बन्द हुन्छ (सम्पा. गिरी) ।
रामवास दलदलेबाट २०६६ मा विष्णुप्रसाद काप्mलेको सम्पादनमा ‘भिसान दर्पण’ प्रकाशन हुन्छ । यसको एक अङ्कमात्र प्रकाशन भएको छ । प्रगतिनगरबाट २०५८ सालमा विजयलक्ष्मी सापकोटाको सम्पादनमा ‘बाल इन्दे्रणी’ वार्षिक पत्रिका प्रकाशन हुन थाल्दछ । वर्तमानसम्म निरन्तर प्रकाशन हुदै आएको यस पत्रिकाको १०औँ अङ्कसम्म प्रकाशन गरिसकेको र ११औँ अङ्कका लागि मुद्रणको तयारी भइरहेको पाइन्छ (सल्लाहकार ः होमनाथ जैशी) । प्रगतिनगरबाट २०६२ मा प्रितम भुजेलको सम्पादनमा साहित्यिक मासिक पत्रिकाका रुपमा ‘सिर्जनाका पूmलहरु’ प्रकाशन हुन्छ । यो १५ अङ्कसम्म प्रकाशन भई बन्द हुन पुग्यो । २०६६–६७ मा प्रितम भुजेलकै सम्पादनमा त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिकाका रुपमा ‘नदी र छालहरु’को प्रकाशन हुन्छ ।
कावासोती नगरीबाट ‘देवचुली’ मासिकका अतिरिक्त अन्य थुप्रै साहित्यिक पत्रिकाहरु प्रकाशन हुन्छन् । २०६० मा लोकनाथ खरेलको सम्पादनमा ‘हिमायती’ द्वैमासिक प्रकाशन हुन्छ । २० अङ्क प्रकाशन भएपछि विविध समस्याका कारण यो पनि बन्द हुन पुग्दछ । अग्निधर ‘अर्जुन अभागी’को सम्पादनमा २०६३ सालमा ‘सम्मिश्रण’ अद्र्धवार्षिक प्रकाशन हुन्छ (सम्मिश्रण, १ः१) । यसका ६ अङ्क प्रकाशन भएपछि यसले पनि बन्दकै नियति भोग्न विवश हुनुपर्दछ । दीपक सोतीको सम्पादनमा २०३४–३५ मा भेरी अञ्चलमा ‘धरा’ मासिक साहित्यिक दर्ता भई २१६ अङ्कसम्म पोखराबाट र २०६४ मा कावासोतीबाट ४ अङ्क प्रकाशन हुन्छन् । २०६४ मा मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसबाट सब्बु भट्टराईको सम्पादनमा ‘भावाञ्जली’को प्रकाशन प्रारम्भ हुन्छ । यसका पछिल्ला अङ्कहरु यादव लामिछानेका सम्पादनमा प्रकाशनमा आए पनि चार अङ्क प्रकाशन भएपछि यो पनि बन्द हुन्छ । दिनेश वस्यालको सम्पादनमा २०६९ सालमा ‘गजल प्रवाह’को प्रथम भाग प्रकाशन आरम्भ भएको छ । गजलप्रधान पुस्तकाकार कृतिका रुपमा देखा परेको यस अभियानले पनि अन्ततः यसै अंकपछि विश्रान्ति लिन पुगेको देखिन्छ ।
चोरमाराबाट २०६१ सालमा नारायण खनाल भावुकको सम्पादनमा ‘श्रेय’ द्वैमासिकको सम्पादन आरम्भ हुन्छ (श्रेय, १ः१) । करिब एक दर्जनजति अङ्क प्रकाशन भएपछि यो पनि बन्द हुन्छ । भूमही रामनगरबाट ‘लालीगुराँस’को सम्पादन हुँदै आएको तथ्य माथिकै अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएकै छ । परासीबाट २०४८ मा घनश्याम परिश्रमीको सम्पादनमा ‘सौदामिनी’ मासिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ हुन्छ । यसका जम्मा दुई अङ्कमात्रै प्रकाशन भएपछि यो बन्द हुन पुग्दछ (सम्पा. भट्टराई) । यस्तै, २०५० तिर परासीबाट नै भूपेन्द्र शर्मा भट्टराईको सम्पादनमा बाल रचनाप्रधान ‘छुनामुना’ बाल पत्रिकाको प्रकाशन हुन्छ । यसका पनि केही अङ्क प्रकाशन भएपछि यो पनि बन्द हुन्छ । यस्तै, २०६१ मा परासीबाट नै प्रदीप बस्यालको सम्पादनमा ‘उषा’ प्रकाशित हुन्छ । अद्यापि, यस पत्रिकाको निरन्तरता रहेको पाइन्छ । यसअतिरिक्त साठी–सत्तरीको दशकमा नै बाल सरोकार, दियालो अस्तित्व, अमिट स्मृति (हवाई पत्रिका), बाडुली, शान्ति दीप, नवप्रभात, सुनौलो प्रभात, आदि पत्रिकाहरु पनि प्रकाशन हुन्छन् । असीको दशकमा किरण भूर्तेलको संयोजन र समन्वयमा ‘मञ्जरी’, ‘रुपान्तरण’, ‘कावासोती’ नगरपालिकाबाट ‘बालपत्रिका’ प्रकाशनमा आएको पाइन्छ । विशुद्ध अनुसन्धानमूलक पत्रिकाका रुपमा २०७२ सालबाट ‘मध्यविन्दु जर्नल’को पाँचौँ अंक प्रकाशनमा आएको छ । कावासोती नगरपालिकाबाट २०७७ सालमा हरि न्यौपानेलगायतको सम्पादनमा ‘नगरका कोपिला’ प्रकाशित हुन्छ ।
यसअतिरिक्त क्याम्पस, कलेज तथा विद्यालयले रजत, स्वर्ण वा हीरक महोत्सवहरुका अवसरमा पनि प्रशस्तै स्मारिकाहरु प्रकाशन गरेका छन् । कतिपयले संस्थाको गतिविधि र परिचय प्रकाशन गर्ने अभिप्रायले पनि स्मारिका प्रकाशन गरेका छन् । यस्ता प्रकृतिका पत्रिकामा पनि भाषा र साहित्यका विभिन्न विधाका पर्याप्त रचनाहरु समावेश गरिएका पाइन्छन् । लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेजको ‘लुम्बिनी सन्देश’, कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पस र मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसको स्मारिका, सरस्वती माविको स्मारिका, कोल्हुवा माविको स्मारिका, देवकोटा माविको देवकोटा स्मारिका, त्रिभुवन माविको आलोक, लुआडिकको लुम्बिनी सन्देश, नवलपुर बोर्डिङ चोरमाराको नवलपुर स्मारिका, सरस्वती उमाविको सरस्वती दर्पण आदि थुप्रै स्मारिका प्रकाशन भएका पाइन्छन् ।
यस प्रकार, जिप्रकामा दर्ता नगरीकन नै पनि थुप्रै साहित्यिक पत्रिकाहरु प्रकाशन भएका छन् । अन्य थुप्रै बिनादर्ता नै यसरी प्रकाशित भएका पत्रिकाहरु केही अंक प्रकाशन भई पछि विविध कारणले बन्द हुन पुग्दा तिनको ऐतिहासिक उपस्थिति (नाम, अंक आदि) पनि वर्तमानमा ओझेलमा पर्न गएको हुन सक्तछ । त्यस्ता पत्रिकाहरु छुट्न गएको भए खोजी गरी तिनलाई पनि आगामी लेखमा समावेश गरिनु हाम्रो धर्म हुन जान्छ । जेजति पत्रिकाहरु प्रकाशन भएका छन् ती सबै नेपाली भाषासाहित्यप्रति असीम श्रद्धा राखेर एवम् साहित्यिक प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने अभिलाषाले भएका छन् । प्रायः पत्रिकाहरु चरम आर्थिक सङ्कट सामना गर्न नसकी विश्रान्त बन्न पुगेका छन् । केही कार्यसमितिका सदस्यहरु निष्क्रिय बन्न गएकाले र केही सदस्यहरु विदेश र कोही अध्ययनार्थ राजधानी पसेकाले पनि पत्रिकाले विश्रान्ति लिएको देखिन्छ र कतिपय पत्रिकाहरु पुनः प्रकाशन आरम्भ गर्ने क्रममा रहेका छन् । नवलपरासीबाट प्रकाशन भएका यी पत्रिकाहरुले नेपाली भाषाको मानकीकरण, आधुनिकीकरण र स्तरीकरण गर्नमा थप इँटाको कार्य गरेको छ भने साहित्यको खास गरी कविता, गजल, कथा, उपन्यास, मुक्तक, निबन्ध, समालोचना विधालाई परिष्कार र परिमार्जन गर्नमा तथा साहित्यको श्रीवृद्धि गर्नमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको छ । यसर्थ, नवलपरासेली साहित्य आशलाग्दो भविष्यतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सुरुङ परीक्षणका क्रममा बागमतीमा नदीमा पानीको सतह घटबढ हुनसक्ने जनाउँदै सजग रहन स्थानीयवासीलाई अपिल...
विद्यार्थीलाई अपशव्द प्रयोग गर्ने शिक्षक पक्राउ, कलेज तोडफोड